Moments Neshamwari 8
Krisimasi ine chero chinhu chinorehwa kune theosophist, uye kana zvakadaro, chii?
Zvinorehwa neKisimusi kumuratidziri zvinoenderana zvikuru nekutenda kwake orudzidziso. Theosophists havasunungurwe kubva pane rusaruro, ivo vachiri vanhu. Theosophists, ndiko kuti, nhengo dzeTheosophical Society, ndudzi dzese, dzinza nekutenda. Izvo zvaizotenderwa neimwe nzira kuti izvo kusarudzika kwenosophist kungave kupi. Kune vanhu vashoma, zvakadaro, avo maonero avo haana kuwedzeredzwa nekunzwisisa kwedzidziso ye theosophical. MuHeberu anonzwisisa Kristu neKisimusi mune imwe nzira yakareruka kupfuura iye asati ave theosophist. Saka ndizvo zvinoita muKristu, nevamwe vese vedzinza rega rega nekutenda. Chirevo chakanyanya chakabatanidzwa paKisimusi naiye theocophist ndechekuti Kristu musimboti kwete munhu, musimboti uyo unosunungura pfungwa kubva mukunyepedzera kukuru kwekuparadzaniswa, unoswededza murume padhuze nemweya yevarume uye unomubatanidza pachimiro rudo rweVamwari nehungwaru. Zuva chiratidzo chemwenje yechokwadi. Zuva rinopfuura muchiratidzo che capricorn pa 21st zuva raDecember pakupera kwemaitiro ake ekumaodzanyemba. Zvadaro kune mazuva matatu apo pasina kuwedzera kwehurefu hwavo uye ipapo pazuva re25th raZvita zuva rinotanga kosi yake yekuchamhembe uye saka anonzi akazvarwa. Vakuru vakapemberera chiitiko ichi nemitambo uye nemufaro, vachiziva kuti nekuuya kwezuva nguva yechando ichipfuura, mbeu dzakakwenenzverwa nemwenje weChiedza uye kuti pasi pasi pesimba rezuva raizobereka michero. Iyo theosophist inorangarira Kisimusi kubva kune akawanda masuo: sekuzvarwa kwezuva mune chiratidzo capricorn, yaizoshanda kune yepanyama; kune rumwe rutivi uye muchimiro chengano ndiko kuberekwa kwezuva risingaoneki remwenje, iye Kristu Musimboti. Kristu, senheyo, anofanira kuberekwa mukati munhu, mune izvo munhu aponeswa kubva pachivi chekusaziva chinounza rufu, uye anofanira kutanga nguva yeupenyu inotungamira kusafa kwake.
Zvichida here kuti Jesu aiva munhu chaiye, uye kuti akazvarwa musi weKrisimusi?
Zvinotokwanisika kuti mumwe aonekwe, angave anonzi Jesu kana kuti Aporo, kana chero rimwe zita. Chokwadi chekuvapo munyika yemamiriyoni evanhu vanozviti maKristu vanopupurira chokwadi, kuti panofanira kunge paine mumwe munhu akadzidzisa chokwadi chikuru-semuenzaniso, avo muMharidzo yepaGomo - uye inonzi Chikristu. dzidziso.
Dai Jesu aiva munhu chaiye nei zvichiitika kuti hatinazve nhoroondo yezvakaitika zvekuberekwa kana hupenyu hwomunhu akadaro kupfuura chirevo chebhaibheri?
Ichokwadi kuti hatina nhoroondo yakamboitika yekuzvarwa kwaJesu kana yehupenyu hwake. Kunyangwe kurehwa kuri munaJosephus kuna Jesu kunotaurwa nezviremera kuve kududzira. Iko kusavapo rekodhi kwakadaro kwakakosha kudiki zvichienzaniswa neidi rekuti dzidziso dzakakamurwa dzakatenderedza hunhu, ingave kana kwete hunhu hwakafadza kana chaihwo. Dzidziso dziripo uye chimwe chemachechi makuru epasirese vanopupurira hunhu. Mwaka chaiwo wakazvarwa Jesu, kunyangwe nyowani wezve dzidziso akasvibiswa anogona kudoma chokwadi. “Vatungamiriri” vacho havana kubvumirana. Vamwe vanoti zvakatangira AD 1; vamwe vanoti zvakange zvakanonoka seAD 6. Pasinei nezviremera vanhu vanoramba vakabatirira kusvika kunguva inozivikanwa nekarenda yaJulian. Jesu anogona kunge aive murume chaiye uye achiri kusazivikanwa kuvanhu sevese, panguva yehupenyu hwake. Zvinogona kuitika ndezvekuti Jesu aive mudzidzisi airaira vanoverengeka veavo vakave vadzidzi vake, izvo vadzidzi vakagamuchira dzidziso yake uye vakaparidza dzidziso dzake. Vadzidzisi vanowanzouya pakati pevarume, asi hazviwanzo kuzivikanwa pasi. Ivo vanosarudza izvo zvakanyanya kukodzera kuti vagamuchire dzidziso-dzechinyakare uye vozviraira, asi ivo havazvipinze munyika uye kunodzidzisa. Kana zvirizvo zvirizvo zvakaitika kuna Jesu zvichazvidavirira vanyori venhau venguva iyoyo vasina kuziva nezvake.
Sei vachidana izvi, 25th yaDecember, Krisimasi pane Jesumass kana Jesuday, kana nedzimwe zita?
Kutozosvikira kwezana rechina kana rechishanu raive zita reKisimusi rakapihwa kumhemberero dzakaitwa pa25th yaDecember. Kisimusi inoreva misa yaKristu, misa yakagadzirirwa, ye, kana kuna Kristu. Naizvozvo izwi rakakodzera raizove raJesu-mushe, nekuti masevhisi aiitwa uye nemitambo yainzi “misa” iyo yaiitwa mangwanani e25th yaDecember yaive kuna Jesu, mucheche akazvarwa. Izvi zvakateverwa nekufara kukuru kwevanhu, vakapisa iyo yei Yule log mukuremekedza sosi yemoto nechiedza; vari kupuruzira, vachicheka zvinonhuwira nezvipo zvakauyiswa naJesu nevakadzi veMabvazuva; uyo akapfuura nepakakomberedza ndiro (uye kazhinji aibatwa zvisina kunaka) nechiratidzo chehupenyu hunopa kubva kuzuva, hwaakavimbisa kuputswa kwemazaya echando, kuyerera kwenzizi, uye kutanga kwemvura mumiti muchirimo. Muti weKisimusi nemaevergreens aishandiswa sevimbiso yekuvandudzwa kwesango, uye zvipo zvaiwanzo kuchinjaniswa, zvichitaridza kunaka kwakanaka kuripo pakati pevose.
Pane nzira yekutsanangurira kuberekwa uye hupenyu hwaJesu here?
Kune, uye ichaoneka seinonzwisisika kune chero ani zvake anoizozviona pasina rusaruro. Kuzvarwa, nehupenyu, nekurovererwa, uye nekumutswa kwaJesu zvinomiririra nzira iyo mweya umwe neumwe unofanirwa kupfuura unouya muhupenyu uye uyo muhupenyu uhwo unosvika mukusafa. Dzidziso dzekereke nezve nhoroondo yaJesu dzinotungamira kubva pachokwadi pamusoro pake. Kududzirwa kwehunyanzvi hweiyo nyaya yebhaibheri kwapihwa pano. Maria muviri wenyama. Izwi rokuti Maria rakafanana mune dzakawanda zvehurongwa hukuru hwezvitendero, avo vakatora zvisikwa zvehumwari sevadziki vavo. Izwi rinobva kuMara, Mare, Mari, uye zvese izvo zvinoreva kuti svutugadzike, gungwa, nyonganiso, kunyengera kukuru. Izvi ndizvo muviri wese wemunhu. Tsika pakati pevaJudha panguva iyoyo, uye vamwe vachiri kuibata nanhasi, yaive yekuti Mesiasi aive achazouya. Izvo zvakanzi Mesia aizozvarwa nemhandara nenzira isina hukama. Izvi hazvina musoro kubva pakuonekwa kwezvisikwa zvepabonde, asi mukuchengeta kwakakwana nezvokwadi dzeesoteric. Zviripo ndezvekuti kana muviri wemunhu ukanyatsodzidziswa uye nekukoshwa unova wakachena, mhandara, wakachena, usina tsvina. Kana muviri wemunhu wasvika padanho rekuchena uye wakachena, zvinobva zvanzi ndiMariya, mhandara, uye agadzirira kuva nepamuviri. Kufunga kusinganzwisisike kunoreva kuti mwari, iye Mwari chaiye, anogununudza muviri unova mhandara. Uku kuumbika kana kubata kunoitwa nekuvhenekerwa kwepfungwa, ndiyo yekutanga yavo yekuziva kusafa uye humwari. Izvi hazvisi zvekufungidzira, asi chaizvo. Ichokwadi chaicho. Kuchena kwemuviri kunochengetwa, panotanga hupenyu hutsva mukati mechimiro chemunhu. Hupenyu hutsva uhwu hunokura zvishoma nezvishoma, uye chimiro chitsva chinodaidzwa kuti chiripo. yakazvarwa neMweya Mutsvene, iwo mwenje weakazvarwa, uye wakazvarwa nemhandara Maria, muviri wayo wenyama. Jesu zvaakapfuura makore ake ekutanga mukuvharika, saizvozvo kuve kwakadaro kuve kwakavanzika. Uyu ndiwo muviri waJesu, kana iye anouya kuzoponesa. Muviri uyu, muviri waJesu, muviri usingafi. Jesu anonzi akauya kuzoponesa nyika. Saka anodaro. Muviri waJesu haife sezvinoita nyama, uye icho chaiziva sechisikwa chapanyama zvino chaendeswa kumuviri mutsva, iwo muviri waJesu, uyo unoponesa kubva kurufu. Muviri waJesu hafi uye wakawana Jesu, kana iye Jesu waakauya kwaari, haachave nemazamu kana ndangariro mundangariro, sezvo iye achiramba achiziva pasi pemamiriro ese ezvinhu nemamiriro ezvinhu chero Haana kupererwa nendangariro kubudikidza nemasikati, nousiku, kuburikidza nerufu, uye nehupenyu hwamangwana.
Iwe wakataura nezvaKristu sechinhu. Unoita musiyano pakati paJesu, naKristu here?
Pane musiyano uripo pakati pemashoko maviri aya uye izvo zvavari kunongedzera kumiririra. Izwi rekuti “Jesu” raiwanzoshandiswa sezita rekuremekedza uye kupihwa kune iye aive rakakodzera. Taratidza izvo zvinoreva Esoteric nezvaJesu. Zvino pane izwi rekuti "Kristu," rinobva muchiGiriki "Chrestos," kana "Christos." Pane mutsauko pakati peChrestos naChristos. Chrestos aive nehupfumi kana mudzidzi akange ari pamabvunzo, uye achiri kuedzwa, gadziriro yekurovererwa kwake kwekufananidzirwa, akanzi Chrestos. Mushure mekutanga akazodzwa ndokudaidzwa kuti Christos, iye akazodzwa. Saka iye uyo uyo akapfuura nemiedzo yese nekutanga uye akawana ruzivo kana kubatana naMwari akanzi "a" kana "Christos." Izvi zvinoshanda kumunhu anoteera musimboti waKristu; asi Kristu kana Christos asina chinyorwa chaicho ihwo Kristu mutemo uye kwete chero munhuwo zvake. Sezvineiwo nezvezita rekuti Jesu, Kristu, zvinoreva kuti musimboti uyo Kristu akange akashanda nawo mukati kana kutora nzvimbo yekugara nemuviri waJesu, uye mutumbi waJesu wakazodaidzwa kuti Jesu Kristu kuratidza kuti iye akange ave asingafi nekuva Muviri waJesu waingova usingafi chete somunhu, asi kuti aivewo netsitsi, akafanana neuMwari, huMwari. Kana ari Jesu wenhoroondo, tichayeuka kuti Jesu haana kudaidzwa Kristu kusvika abhabhatidzwa. Paakanga achikwira achibva murwizi rweJoridhani zvinonzi mweya wakaburuka pamusoro pake uye inzwi rakabva kudenga richiti: "Uyu ndiye Mwanakomana wangu anodikanwa, wandinofarira kwazvo." Ipapo uye shure kweizvozvo Jesu akanzi Jesu Kristu, kana Kristu Jesu, nokudaro zvichireva kuti murume-mwari kana mwari-munhu. Chero munhu chero munhu anogona kuve Kristu nekuzvibatanidza pachavo kune Kristu nheyo, asi mubatanidzwa usati waitika anofanira kunge ave nekuzvarwa patsva. Kushandisa mazwi aJesu, "Unofanira kuberekwa patsva usati wagara nhaka yeumambo hwedenga." Izvi zvinoreva kuti, muviri wake waisafanira kuberekwa patsva, asi kuti iye, semunhu, anofanira kuberekwa sechinhu chisingafi chinobva kana kuburikidza nemuviri wake wenyama, uye kuti kuberekwa kwakadaro kwaizove kuberekwa kwaJesu, Jesu wake. Ipapo chete zvaizokwanisika kuti vagare nhaka yehumambo hwedenga, nekuti kunyangwe zvichikwanisika kuti Jesu aumbwe mukati memhandara, hazvigoneke kuti Kristu musimboti akaumbwa kudaro, sezvo uri kure kwazvo kubviswa kubva nyama uye inoda muviri wakanyanya kushandurwa kana kukura kuti uratidze kuburikidza. Naizvozvo kwakakodzera kuti uve nemuviri usingafi unonzi Jesu kana nerimwe zita ripi zvawo rakagadzwa pamberi paKristu seLogos, iro Shoko, rinogona kuratidzwa kumunhu. Zvichayeukwa kuti Pauro akakurudzira vaaishanda navo kana vadzidzi kuti vashande uye vanamate kusvikira Kristu aumbwa mukati mavo.
Ndeipi chikonzero chaicho chiripo chekupemberera zuva reC25th raDecember seyekuzvarwa kwaJesu?
Icho chikonzero ndechekuti iyo nguva yemasikirwo uye inogona kupembedzwa pasina imwe nguva; nekuti kana inotorwa kubva muchadenga, kana sekuzvarwa kwemuviri wemuviri, kana zuva rekuzvarwa, iro zuva rinofanira kunge riri pazuva re25th yaZvita, kana zuva parinopinda muchisatidzo capricorn. Ivo vekare vainyatsoziva izvi, uye vakapemberera mazuva ekuzvarwa evaponesi vavo pa kana nezve 25th yaDecember. VaIjipita vakapemberera zuva rekuzvarwa kwavo Horus pazuva re25th raZvita; maPersia vakapemberera zuva rekuzvarwa kweMithras yavo pazuva re25th raZvita; vaRoma vakapemberera Saturnalia yavo, kana zera regoridhe, pazuva re25th raZvita, uye pazuva iri zuva rakazvarwa uye aive mwanakomana wezuva risingaonekwe; kana, sekureva kwavo, "die natalis, invicti, solis." kana zuva rekuzvarwa kwezuva risingakundiki. Hukama hwaJesu na Kirisito hunozivikanwa nekwaari hunhu hwekufungidzira nezvakaitika zuva, nekuti iye, Jesu, anozvarwa musi we25th waDecember, rinova zuva iro zuva rinotanga rwendo rwake rwekuchamhembe muchiratidzo che capricorn, kutanga yemagetsi munguva yechando; asi hazvisi kusvikira apfuura iyo vernal equinox muchiratidzo cheees izvo zvinonzi akawana simba rake nesimba. Ipapo ndudzi dzavekare dzaiimba nziyo dzadzo dzekufara nekurumbidza. Ndiyo nguva ino Jesu anova Kristu. Anomutswa kubva kuvakafa uye akabatanidzwa namwari wake. Ichi ndicho chikonzero nei isu vachipemberera zuva rekuzvarwa raJesu, uye nei "vahedheni" vakapemberera zuva rekuzvarwa kwevamwari vavo pazuva re25th raZvita.
Kana zvichikwanisika kuti munhu ave Kristu, unozadzika sei uye sei wakabatana neZuva ra 25th raDecember?
Kune mumwe akarererwa mumusha wechiKristu chiitiko chakadai chingaite sounotyisa; kumudzidzi anoziva nezve chitendero uye uzivi hazvizoiti sezvisingabviri; uye maSainzi, zvishoma pane zvese, anofanira kuzviona sezvisingaite, nekuti inyaya yekushanduka-shanduka. Kuzvarwa kwaJesu, kuberekwa kwechipiri, kwakabatana ne25th yaDecember nekuda kwezvikonzero zvakawanda, pakati pavo izvo izvo kuti muviri wemunhu wakavakirwa pachisungo chakafanana nepasi uye uchiteerana nemitemo yakafanana. Zvese pasi nemuviri zvinoenderana nemirairo yezuva. Pazuva re25th raDecember, kana zuva parinopinda chiratidzo che capricorn, muviri wemunhu, uchipa wakadarika nekudzidziswa kwese nekuvandudzwa, wakanyatsokodzera kuti mhemberero yakadaro iitike. Gadziriro dzakapfuura dzinodikanwa ndeyekuti hupenyu hwekuchena hwakakwana hurarame, uye kuti pfungwa dzinofanira kuve dzakadzidziswa zvakanaka uye hunyanzvi, uye kuve nekugona kuenderera chero mutsara webasa kune chero urefu hwenguva. Hupenyu hwakachena, muviri une ruzha, zvishuwo zvakadzora uye nepfungwa dzakasimba zvinoita kuti icho chaidaidzwa kuti Mbeu ya Kristu chigotora midzi muvhu mhandara yemuviri, uye mukati memuviri wenyama kuvaka iwo mukati -divine chimiro. Kwakaitwa izvi maitiro anodikanwa akapfuurirwamo. Nguva yakasvika, mhemberero yakaitika, uye kekutanga muviri usingafi uyo kwenguva refu wanga uchigadziriswa mukati memuviri wenyama pakupedzisira wabuda mumuviri wenyama uye wakazvarwa kuburikidza nawo. Mutumbi uyu, unonzi muviri waJesu, hausi wemuviri weredral kana kuti linga sharira unotaurwa nezvake nevanoongorora nezvenyorwa, uye haisi chero yemiviri inoratidzika pamashure kana kuti isvikiro rinoshandisa. Pane zvikonzero zvakawanda zveizvi, pakati pazvo ndezvekuti linga sharira kana astral muviri wakabatana nemuviri wenyama, netambo kana umbilical tambo, asi iyo isingafi kana Jesu muviri wayo isina kubatana. Linga sharira kana astral muviri wepakati haisi-ungwaru, nepo Jesu kana muviri usingafi haungoparadzane uye wakasarudzika kubva mumuviri wenyama, asi wakangwara uye une simba uye unoziva uye ungwaru. Izvo hazvimboregi kurasikirwa nekuziva, uyezve haina kana chiputi muhupenyu kana kubva kuhupenyu kuenda kuhupenyu kana gango mundangariro. Maitiro anodikanwa kuti ave nehupenyu uye asvike pakuzvarwa kwechipiri ari mumitsara uye nemisimboti yenyeredzi, asi nhoroondo dzakanyanya kureba uye hadzigone kupihwa pano.